Nin ka baxsaday xabsi ku yaal Belgium oo kaar jeejees ah u soo diray madaxda xabsiga… – Hagaag.com
Posted on 25 Janaayo 2020 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Xaalad maad leh oo ku saabsan bulshada xabsiyada ama maxaabiista iyo ilaaladeeda, hadaba nin ka baxsaday xabsi ku yaalla Beljam bishii la soo dhaafay ayaa ku jeesjeesey asxaabtiisii ​​hore isagoo u diray kaadh boosta ah oo leh “Salaan ka timid Thailand”.
Walid Sakaki – oo reer Morooko ah – wuxuu ka mid ahaa shan dambiilayaal oo ka baxsaday Xabsiga Turnhout ee gobolka Antwerp 19-kii bishii December, si la yaab leh, ka dib markii ay fuuleen darbiga xabsiga iyadoo meel aan ka fogeyn ay u taagneyd gaarigii la carari lahaa.
Mid ka mid ah Ilaalada xabsiga ayaa u sheegay telefishanka Mareykanka, “CNN”, in warqad ku socotay seddax agaasime ay timid xabsiga. Gudaha baqshadaha ayaa ku jiray kaarar boosto oo leh “Salaan ka timid Thailand” “.
Wargeyska The Independent ayaa sheegay in sedex ka mid ah shanta maxbuus ee baxsatay laga soo xiray meel ku dhow xabsiga habeenkii dambe, halka kan afaraadna uu u baxsaday dibadda, laakiin booliisku waxay ka soo xireen magaalada Nijmegen, ee Netherlands, bishii Janaayo.
Laakin waxaa la waayey raadkii Al-Sakaki ilaa inta kaadhka boosta laga keenay Isniintii, oo warqaddu la rumeysan yahay inay tahay mid sax ah maxaa yeelay waxaa lagu diray habka warqadaha diiwaanka gashan.
Sida uu qoray wargayska Beljamka de Morgen ayaa sheegay in Sakaki la qabtay bishii Janaayo 2017 kadib markii booliisku gaarigiisa ka dhex heleen 25,000 kiniiniyada maandooriyaha ee Ecstasy ah, sidoo kale waxaa loo doonayay in su’aalo laga waydiiyo shil toogasho hore ahaa.
Waxaa xusid mudan in Sakaki uu yahay walaalka ka yaraa Ashraf Sakaki oo dhawr jeer ka baxsaday xabsiga. Dhacdadii sanadkii 2009, walaalkiisa ka weyn wuxuu adeegsaday diyaarad helicopter ah oo la soo afduubay si uu uga baxsado qaab aad u yaab badan markii loo eego xabsiga ku yaal magaalada Brugge ee Biljimka.